यस वर्षको मदन पुरस्कार ‘धृतराष्ट्र’ लाई
यस बर्षको मदन पुरस्कार घनश्याम कँडेललाई दिइने भएको छ। उहाँद्वारा लिखित ‘धृतराष्ट्र’ पुस्तकलाई यस वर्षको मदन पुरस्कार दिने निर्णय भएको मदन पुरस्कार गुठीले जनाएको छ। यस्तै यस वर्षको जगदम्बा श्री ..
रश्मिको “प्रियतम” सार्वजनिक
युवा साहित्यकार रश्मि रोदनको नविनतम् कृति प्रियतम सार्वजनिक गरिएको छ । संग्रहमा १०१ मुक्तकहरु छन् । वरिष्ठ गजलकार ज्ञानुवाकर पौडेलको प्रमुख आतिथी थिए । गजलकार डा।कृष्णहरि बराल, साहित्यकार पोष्टराज चापागाईं, ..
सञ्चारकर्मी जीवनको ‘ओझेल’ बिमोचन
सञ्चारकर्मी जीवन खड्काको पहिलो उपन्यास ‘ओझेल’ बिचोचन गरिएको छ । काठमाण्डौँको कालिकास्थान स्थित सर्वनाम नाटक घरमा सञ्चारकर्मी, पत्रकार तथा साहित्यकारहरुको उपस्थितीमा उपन्यासको बिमोचन गरिएको हो । उपन्यासको बिमोचन बरिष्ठ समिक्षक ..
राष्ट्रकवि घिमिरे दम्पत्तिलाई सम्मान ।
सिन्धुली बाङ्मय प्रतिस्ठानले राष्ट्रकवि माधव घिमिरे दम्पत्तिलाई सम्मान गरेको छ । बुधबार राजधानीमा राष्ट्रकवि घिमिरे दम्पत्तिलाई प्रतिष्ठानका अध्यक्ष शम्भु ढकाल ‘अञ्जुल’ ले दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका हुन् । नेपाली साहित्यका ..
नेत्र एटमको नजरमा उत्कृष्ट पाँच उपन्यास
नेपाली साहित्यमा चिरपरिचित एउटा नाम हो डा. नेत्र एटम । समालोचना, कविता, कथा र गजल जस्ता विधामा अब्बल डा. एटमको वास्तविक नाम भने नेत्रमणि सुवेदी हो । तर उनलाई साहित्यको ..
पाँच गजल जसले तपाईँलाई सन्ध्याको फ्यान बनाउनेछ
सन्ध्या सापकोटा साहित्यप्रति समर्पित नाम हो । जीवनको २२ औँ वर्षमा हिँडीरहकी सन्ध्या, अहिले लेबननमा छिन् । मोरङ ६, मधुमल्लामा जन्मिएकी उनी सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छिन् । हरेक दिन ..
पत्रकार, निर्देशक हुँदै साहित्यकार बने डब्बु क्षेत्री
रंगपत्रकार एवं निर्देशक डब्बु क्षेत्रीको कथा संग्रह ‘नमस्ते काठमान्डु’ लोकार्पण गरिएको छ । सर्वनाम थिएटरको प्रस्तुतिसहित पुस्तक विमोचन गरिएको हो । कथा संग्रह सार्वजनिक भएसँगै डब्बु क्षेत्री अब पत्रकार, निर्देशक ..